Isoftware yokuphrinta ehamba phambili ye-3D yabenzi | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Isoftware yokuphrinta ehamba phambili ye-3D yabenzi
Isaka | | Ukuphrinta kwe-3D
La Ukuphrinta kwe-3D Sekungomunye wemigomo yezobuchwepheshe enikeza amathuba amaningi. Ihambile iminyaka lapho amaphrinta ebengaphrinta kuphela ngobukhulu obubili. Manje usungadala inqwaba yezibalo ezintweni ezahlukahlukene futhi ngevolumu ngenxa yalezi Izinhlelo zokuphrinta ze-3D.
Ukuze ukwazi sebenza nesoftware enhle kakhulu, kufanele wazi zonke izinkinobho zalolu hlobo lohlelo, ngaphezu kokwazi uhlu lokuhamba phambili ongakuthola futhi okuhambisana ne-Linux (noma i-multiplatform), umthombo ovulekile, futhi mahhala ...
1 Uhlu lwezinhlelo ezinhle kakhulu zokuphrinta ze-3D
1.8 I-Ultimaker Cura
1.9 Ukubamba okungu-123D
1.10 I-3D Slash
1.13 Buka i-STL
1.14 INetfabb Eyisisekelo
Uhlu lwezinhlelo ezinhle kakhulu zokuphrinta ze-3D
Uhlu olunezinye ze izinhlelo ezinhle zokuphrinta ze-3D ongathola ukuthi:
Ingenye yezinhlelo ezinamandla kakhulu futhi ezisetshenzisiwe emphakathini wesoftware wamahhala. Kumahhala futhi kuyatholakala ngezingxenyekazi ezahlukahlukene, kufaka phakathi i-Linux. Kuyisoftware enamandla Idizayini ye-3D CAD, futhi nethuba lokuwaphrinta ngephrinta yakho.
Uhlelo olwaziwayo, futhi lwazo zonke izinhlobo zabasebenzisi, kusuka kongoti kuya kwabanye abanolwazi kakhulu. Ngethuba lokuklama futhi Ukumodela kwe-3D amaphrinta. Inenguqulo ekhokhelwayo, futhi iyatholakala kokubili kudeskithophu nakuhlobo lwayo lwewebhu.
Kubhekiswe kubasebenzisi abangochwepheshe abadinga iSlicer ukulungisa amafomethi wefomethi ye-STL. Ikona Inamandla kakhulu, yize ilayisense layo libiza ngandlela thile.
Kuyisoftware yamahhala ngokuphelele, nenguqulo etholakalayo yezingxenyekazi ezahlukahlukene, neLinux. Inikeza indawo ye- ukuthuthukiswa kobuchwepheshe ngemiklamo yakho ye-3D, yize incike kuSlicer Software.
Ingenye yamaphrojekthi wesoftware yomthombo ovulekile enamandla kakhulu futhi professional, ngobuningi bezinketho zokwakheka nokumodela kwe-3D. Kumahhala ngokuphelele, kuyatholakala ngezingxenyekazi ezahlukahlukene ezinjengeLinux, futhi kukuvumela ukuthi ube nenombolo engapheli yamathuluzi wanoma yini ...
Enye indlela yokumodela nokwakhiwa kwe-3D nokuphrinta kwe-XNUMXD. Kutholakalela amapulatifomu amaningana, kufaka phakathi iLinux, Kumahhala futhi iza nekhithi ye- amathuluzi ochwepheshe kakhulu ukuhlela ama-STL.
Le software ingenye yesoftware yokuphrinta ehamba phambili ye-3D, kuhloselwe ochwepheshe. Kodwa-ke, ngeke kudingeke ukhokhe ilayisense ebizayo, ngoba imahhala. Itholakala kuzingxenyekazi ezahlukahlukene, njengeLinux. Futhi isebenza ukulawula iphrinta yakho ye-3D, njengokuqala, ukumisa isikhashana, noma ukuphazamisa ukuphrinta ...
Kuyisoftware yabaqalayo abafuna ukuqala emhlabeni wokuphrinta kwe-3D. Yini enye, yamukela amafayela we-STL yalolu hlobo lwamaphrinta e-3D. Vele imahhala ngokuphelele futhi iyatholakala kuma-platforms ahlukahlukene, njenge-MacOS, iWindows neLinux. Ngaphezu kwalokho, futhi inenguqulo ye-Enterprise enemisebenzi eminingi, kepha ngemali ekhokhwayo.
Kuluhlelo lwe-3D lokuphrinta kwabadumile Inkampani ye-Autodesk, efanayo naleyo eqala i-AutoCAD. Kuyisoftware ethakazelisa kakhulu enezici ezifanayo nezangaphambilini, ngaphezu kokukhululeka. Vele ayitholakali ngeLinux, kuphela i-macOS neWindows, kanye namadivayisi weselula we-Android.
Enye isoftware engenawo umona ngama-greats, ngaphezu kokukhululeka futhi enethuba lokwenza amamodeli e-3D avela kuzingxenyekazi ezahlukahlukene, ezinjenge isikhombimsebenzisi seWebhu ukumodela kusuka kunoma iyiphi idivayisi.
Landa i-3D Slash
Enye isoftware evela kufayela le- i-autodesk enamandla onke. Yize kungewona umthombo ovulekile, kuyisoftware esebenzayo futhi ethandwa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kumahhala futhi ongakusebenzisa kuzingxenyekazi ezahlukahlukene, noma iLinux uma kusetshenziswa uhlelo lwayo lwewebhu.
Ifana kakhulu neyangaphambilini, enethuba lokumodela nge-3D kuzingxenyekazi ezahlukahlukene, ngoba isuselwa ku I-WebGL graphical API futhi kwenziwa kusandiso ongasifaka ku-Google Chrome. Vele, kumahhala ngokuphelele.
Akuyona uhlelo lokumodela, kepha kuyakuvumela ukuthi uvule futhi ubuke amafayela we-STL. Lokho kuzokuvumela ukuthi ube ne- simple Isibukeli sokwakheka kwe-3D. Ibuye isuselwe kuwebhu, ngakho-ke ungalayisha amamodeli wakho kusuka kunoma yisiphi isiphequluli sewebhu.
Kuyisoftware ekahle kulabo abafuna izinhlelo zokuphrinta ze-3D eziklanyelwe abasebenzisi abaphakathi. Konke okudingayo ukulungiselela amafayela we-STL futhi ukwazi ukuphrinta okudingayo, kanye ne- lungisa, hlela, futhi uhlaziye Imiklamo. Vele kumahhala (yize sekukhokhelwe izinhlobo) futhi kuyatholakala ngeWindows.
Thwebula Netfabb Basic
Ifana kakhulu neyangaphambilini, futhi incike kuSlicer. Kumahhala futhi kuyatholakala nge- I-Linux, iWindows, ne-MacOS esimweni esinjalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Isoftware yokuphrinta ehamba phambili ye-3D yabenzi
Guqula i-JPG ibe yi-STL online, ngaphandle kokufaka izinhlelo
Ungayikhetha kanjani i-multimeter: zonke izeluleko odinga ukuzazi